musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Canada inozivisa kuwedzera kwekurambidzwa kwendege kubva kuIndia
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sezvo Canada ichigadzirira kudzoka kwendege dzakananga kubva kuIndia kuenda kuCanada, Transport Canada iri kuzivisa kuwedzerwa kweC ziviso kuenda kuAirmen (NOTAM) iyo inorambidza vese vatengesi vekunze uye vega vatyairi kuenda kuCanada kubva kuIndia kusvika munaGunyana 26, 2021, na23: 59 EDT.
Sezvo Canada iri kugadzirira kudzoka kwendege dzakananga kubva kuIndia kuenda kuCanada, Transport Canada iri kuzivisa kuwedzerwa kweChiziviso kuAirmen (NOTAM) ichimisa ndege kuCanada kubva kuIndia.
Wese munhu muCanada anorayirwa kuti adzivise kufamba kusiri-kukosha kunze kweCanada - kufamba kwenyika dzese kunowedzera mukana wekuratidzwa, uye kupararira kweCOVID-19, kusanganisira hutachiona hunokonzerwa nemhando dzakasiyana.
Border nehutano hweveruzhinji matanho anoramba ari pasi pekuchinja sezvo mamiriro echirwere achichinja.
Canada inoramba ichitora nzira ine njodzi-uye yakayerwa nzira yekuvhurazve muganho ichikoshesa hutano nekuchengetedzeka kwevanhu vese muCanada.
Sezvo Canada ichigadzirira kudzoka kwendege dzakananga kubva kuIndia kuenda kuCanada, Kutakura Canada iri kuzivisa kuwedzerwa kweCherechedzo kuAirmen (NOTAM) iyo inodzora dzese dzekutengesa uye dzakazvimirira dzevatyairi kuenda kuCanada kubva kuIndia kusvika munaGunyana 26, 2021, na23: 59 EDT.
Kana kamwe kurambidzwa kwendege dzakananga kwapera, vafambi vanokodzera kupinda muCanada vachakwanisa kukwira nendege dzakananga kubva kuIndia kuenda Kanadha uine anotevera ekuwedzera matanho:
Vafambi vanofanirwa kuve nehumbowo hweasina kunaka COVID-19 mamorekuru bvunzo kubva kune yakatenderwa Genestrings Laboratory panhandare yendege yeDelhi yakatorwa mukati maawa gumi nemana kubva pakatarwa nendege yavo yakananga kuCanada.
Vasati vakwira, vanoshanda nendege vanenge vachiongorora bvunzo dzevafambi vachivimbisa kuti vanokodzera kuuya kuCanada, uye vafambi vakazara vakabaiwa ruzivo rwavo muAppleCAN nharembozha kana webhusaiti. Vafambi vasingakwanise kuzadzisa izvi zvinodiwa vachanyimwa kukwira.
Sekutanga nhanho, musi waGunyana 22, 2021, nhatu nendege dzakanangana kubva kuIndia dzichasvika muCanada uye vese vafambi pane idzi ndege vanozoongororwa COVID-19 pavanosvika kuti vaone kuti matanho matsva ari kushanda.
Mushure mekutangazve kwendege dzakananga, vafambi vanokodzera kupinda muCanada vanobva India ku Kanadha kuburikidza nenzira isina kunangana ichaenderera ichidikanwa kuti uwane, mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekubva, yakavimbika isina kunaka COVID-72 mamorekuru bvunzo kubva kune imwe nyika yechitatu - kunze kweIndia - vasati vaenderera nerwendo rwavo kuCanada.
Wese munhu muCanada anorayirwa kuti adzivise kufamba kusiri-kukosha kunze kweCanada - kufamba kwenyika dzese kunowedzera mukana wekuratidzwa, uye kupararira kweCOVID-19, kusanganisira hutachiona hunokonzerwa nemhando dzakasiyana. Border nehutano hweveruzhinji matanho anoramba ari pasi pekuchinja sezvo mamiriro echirwere achichinja.